Obodo a na-eji mmiri emepụta ụdị ihe eji eme ihe
Akwa obodo mmiri na-emepụta ejiji
Iwu obodo Land Land rules dị mfe na ngwa ngwa ịkọwa: iji nwee ike igwu obodo, ala, mmiri ị chọrọ 2 ma ọ bụ karịa egwuregwu. Onye ọ bụla ọkpụkpọ chọrọ akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke DINA-4 akwụkwọ na pen. Mgbe ahụ, otu ụdị kwesịrị ekwesị nke ịchọrọ igwu egwu. Maka isiokwu ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe ị ga-ahụ ebe a ihe ngwọta gị.
City Country River Solutions Ejiji ika A ruo Z
Egwuregwu na A: Armani
Egwuregwu na B: Bruno Banani
Ejiji ejiji C: Chanel
Ejiri ejiji D: Dior
Egwuregwu na E: Escada
Ụdị ejiji na F: Fendi
Ejiri akara na G: Gucci
Ụdị ejiji na H: Hermés
Egwuregwu na m: Issey Miyake
Egwuregwu na J: Joop
Njirimara ejiji na K: Kenzo
Njirimara ejiji na L: Lacoste
Ejiji ejiji na M: Moschino
Ejiri ejiji N: Nike
Ejiri akara na O: Mmanụ
Ejiri ejiji P: Puma
Akara ngosi na Q: Ndenye Silver
Akara ngosi na R: Rebook
Ụdị ejiji na S: Stüssy
Ejiri ejiji T: Timberland
Ejiji ejiji na U: Ungaro
Ejiji ngosi na V: Valentino
Ejiji ejiji na W: Wrangler
Ejiji ngosi na X: X-Large
Ejiri akara na Y: Yamamoto
Ejiri ejiji Z: Zenga
Mba obodo ukwu dị ka ihe ngosi
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyịỌ bụrụ na ị nwere echiche maka isiokwu ọhụrụ pụrụ iche maka City Country River.
Obodo Land River Solutions Land
City Land River Solutions Ọrụ
Obodo ngwongwo mmiri obodo dị iche iche
Obodo obodo osimiri ngwọta agba
Obodo na-eji mmiri edozi uwe
Egwuregwu ngwongwo egwu mmiri nke obodo
City Country River Solutions Aha
Obodo obodo na-egwu egwuregwu mmiri
City Land River Solutions Asụsụ